အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီယုံကြည်စိတ်ချ sarcoidosis လူနာများနှင့် sarcoidosis သုတေသနတစ်ခုကျယ်ပြန့်, အကြောင်းကြားဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ဖို့ကူညီတဲ့သူကသူတို့စောင့်ရှောက်သူများ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထွက်ရှာပါနှင့်လျှောက်ထားရန်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ပုံစံဖြည့်စွက်။
အစိတ်အပိုင်းအတွက် SarcoidosisUK ၏လုပျငနျးမှကျေးဇူးတင်ပါသည် sarcoidosis သို့ရာအရပျကိုယူပြီးသုတေသနတစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏလည်းမရှိ။ အဆိုပါ '' sarcoidosis အများပြည်သူက 'ပိုကောင်းကုသမှု, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သုတေသနပေးမညျဖွစျကွောငျးန်ဆောင်မှုများပေးရန်, ဒီသုတေသနအရေးပါနှင့်, extension ကိုအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီပိုကောင်းလူနာနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများပါဝင်ပတ်သက်ရ enable နှင့် sarcoidosis သုတေသနနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်အောင်သစ်တစ်ခုအစပျိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ '' Sarcoidosis ပြည်သူ့ '' ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလား
အဆိုပါဝေါဟာရကို '' sarcoidosis အများပြည်သူ '(သူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းရောဂါနှင့်လွှတ်အတွက်အပါအဝငျ) sarcoidosis လူနာ, သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်သူများ, ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် sarcoidosis စပ်လျဉ်းကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်သူသည်အခြားမည်သူမဆိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစ (ထိုကဲ့သို့သော SarcoidosisUK ကဲ့သို့) sarcoidosis လူနာကိုယ်စားပြုကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လူမျိုး၏ကန့်သတ်အရေအတွက်အားပါဝင်နိုင်သည်။
အဘယ်မှာရှိ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီထဲမှာလာကြသလား
အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီသူတို့ကိုယ်သူတို့အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးတော့ SarcoidosisUK ကရွေးချယ်ကြသူစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းခဲ့လိမ့်မည်။ သူတို့ကထင်မြင်ယူဆ, လိုအပ်ချက်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးရှိသည်သူ sarcoidosis အများပြည်သူထံမှတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချအုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ SarcoidosisUK သုတေသနစီမံကိန်းများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဖွဲ့ဝင်များကပဌနာပြုပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောလျှင်ကောင်စီအတူတကွတွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ကွန်ဖရခေါ်ဆိုခကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပေမည်။ အဆိုပါလူနာကောင်စီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်အောက်က SarcoidosisUK လူနာကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Agreement ကိုဖတ်ပါ။
အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသုတေသန၏အဘယျကြင်နာ Get နိုင်သလား?
အဆိုပါလူနာကောင်စီတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါသုတေသနအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်။ တချို့ကသေးငယ်စီမံကိန်းများကိုသာ5မိနစ်တောင်းမည်, အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းပြီးပါကဥပမာ။ အခြားသူများကကတိကဝတ်များနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာရှည်စီမံကိန်းများ, ဖြစ်ကောင်းတည်မြဲနှစ်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သုတေသနစီမံကိန်းများ SarcoidosisUK သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသုတေသနမိတ်ဖက်တစ်ဦးကဦးဆောင်လိမ့်မည်။
(ဒီသုတေသန၏, လက်တွေ့ epidemiological, လူဦးရေ, လူမှုသို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်ပါတယ်) သုတေသနအတွက်ပါဝင်
အပေါ်မှတ်ချက်ပေးနှင့် / သို့မဟုတ်သုတေသနပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လေ့လာမှုများဖွံ့ဖြိုးဆဲ
အပေါ်မှတ်ချက်ပေးနှင့် / သို့မဟုတ်လူနာသတင်းအချက်အလက်ပစ္စည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်ဒေသခံများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ NHS ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူအပြန်အလှန်သည်းခံသံတမန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်
အဘယ်ကြောင့် SarcoidosisUK လူနာကောင်စီအရေးကြီးပါသလဲ
အဆိုပါ sarcoidosis အများပြည်သူ၏အမြင်များနှင့်ဤကဲ့သို့သော Clinician, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကော်မရှင်, ပညာရှင်များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် sarcoidosis ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်သောလူများ၏အမြင်များအကြားလုပ်ခံရဖို့အရေးပါသောဂုဏ်ထူးရှိပါသည်။ အဆိုပါလူနာစကားသံကိုအများဆုံးအရေးပါပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီမကြာခဏမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့ကွန်နက်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံ, sarcoidosis ရှိသည်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များအားဖြင့်အထဲကရေနစ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီ sarcoidosis အများပြည်သူတစ်ရပ်သော authoritative စကားသံကိုပေးစေခြင်းငှါဤအကွာဟချက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလူနာတိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘဝတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သုတေသနထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။
SarcoidosisUK အားလုံးလူနာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များမှမိမိတို့၏ဥရောပလူနာသံအမတ်ကြီးအစီအစဉ် (EPAP) သင်တန်းကိုဆက်ကပ်ရန်ဥရောပအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်း (elf) နဲ့ဖွင့်ပူးပေါင်းပါပွီ။ ဤသည်ကိုသူတို့ထိရောက်သောလူနာကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်လာဖို့လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုဖြည့်စွက်ရန်န်းကျင်ကို 10 နာရီကြာ 'သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီပေးရေး' နဲ့ 'ကုသမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း' 'အပါအဝင် 11 module တွေရှိပါတယ်။ program ကိုယူပြီးတဆင့်, ကျောင်းသားများနိုင်ပါလိမ့်မည်သူတို့က Shared အတွေ့အကြုံများဆွေးနွေးရန်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှုပ်ရှားမှုများသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အခွင့်အလမ်းများပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုငျရှိရာသံတမန်တစ်ဦးအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း join ။ အဆိုပါ EPAP သင်တန်းကိုယူပြီးအားရသက်သာပေမယ့်လူနာကောင်စီလျှောက်ထားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည် ဤနေရာတွင် EPAP။ အဆိုပါအဘို့အသငျသညျမှတ်ပုံတင်နိုင် EPAP သင်တန်းကဒီမှာ.
စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်? သင် SarcoidosisUK လူနာကောင်စီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လျှောက်ထားချင်ပါတယ်လျှင်, အဖွဲ့ဝင်သဘောတူညီချက်နဲ့ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါ်လစီကိုဖတ်ရှုပြီးတော့အောက်က form မှာဖြည့်ပေးပါ။ သင်၏လျှောက်လွှာငါတို့ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးအဖြစ်တုန့်ပြန်နှင့်အတူနောက်ကျောကိုသင်ရနှင့်လက်ရှိသုတေသနစီမံကိန်းများအပေါ်အသေးစိတ်ပါလိမ့်မယ်လက်ခံရရှိထားပြီးပြီးတာနဲ့။
အဆိုပါ Read SarcoidosisUK လူနာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ '' သဘောတူညီချက်ကို.
အဆိုပါ Read SarcoidosisUK သုတေသနသင်တန်းသားများ '' ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ.
အဆိုပါ SarcoidosisUK လူနာကောင်စီမှ Apply
အကောင်းဆုံးကိုသင်ဖော်ပြထားတယ်သောဝေါဟာရကိုရွေးချယ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကိုသင်ဖော်ပြထားတယ်သောဝေါဟာရကိုရွေးချယ်ပါ။လူနာလူနာ - လွှတ်အတွက်လူနာ - ရောဂါအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေအုပ်ထိန်း - မိသားစုအုပ်ထိန်း - မိတျဆှေအုပ်ထိန်း - အခြား (Non-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်)လူနာကိုယ်စားလှယ်
သင် EPAP သင်တန်းယူပြီးစိတ်ဝင်စားပါသလား? သင် EPAP သင်တန်းယူပြီးစိတ်ဝင်စားပါသလား?ဟုတ်ကဲ့ - ငါမှတ်ပုံတင်ရပြီဟုတ်ကဲ့ - ငါမကြာမီမှတ်ပုံတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်မသေချာပါအဘယ်သူမျှမ
ဘယ်လိုသင်လူနာကောင်စီအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါ့မလား - မပို 200 ထက်စကားလုံးများကိုရေးပါ။
ငါ (အထက်) ကိုဖတ်ပါနှင့် SarcoidosisUK လူနာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်သဘောတူညီချက်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ ငါ (အထက်) ကိုဖတ်ပါနှင့် SarcoidosisUK လူနာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်သဘောတူညီချက်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့
ငါ SarcoidosisUK သုတေသန Particpants '' ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ (အထက်) ကိုဖတ်ပါနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ ငါ SarcoidosisUK သုတေသန Particpants '' ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ (အထက်) ကိုဖတ်ပါနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့